नपारी स्वाङ बाँचिदेऊ आफ्नै लयमा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
बदलिइरहेको आर्थिक संरचनाको एक ‘पावरफुल’ कारिन्दा हो, रणकला । आर्थिक संरचनासँगै फेरिने परिवार र समाजको ढाँचा चलाउन पुरानै फर्मुला काफी छैन । यसैले उसको जीवनमा उसकै नियम चल्छ । रणकला सिंगो एजेन्सी हो । ऊ ‘इनलाइटन’ पात्र हो । यसैले पनि पुस्तकका पाना पानामा मलाई उसको याद आइरह्यो । सिनेमाको एक सन्त पात्र ! अर्कैका लागि बाँचिदिँदा स्टेजमा नाँच्न सकेकी थिइनँ, म पनि । छोक्न्यी रिन्पोचे र रणकलाले अझै बलियो गरी भनेझै लाग्यो— यो तिम्रो आफ्नै जिन्दगी हो । नपारेर स्वाङ बाँचिदेऊ आफ्नै लयमा । अभिव्यक्त गर आफूलाई बाँच्दाबाँच्दै जागेको सत्यको प्रकाशमा ! प्रकाशित : चैत्र १६, २०७५ ११:३८
सहरका कुनाकुना गाउँका कुनाकुनामा सुरक्षाको उज्यालोमा छोरीहरू मुस्कुराउनैपर्छ । हरेक पटक यो भन्छौं । महिलाहरू जहाँ काम गर्छन्, स्वतन्त्र वा जागिरे त्यहाँका जिम्मेवाार व्यक्तिले उनीहरूको सुरक्षामा अनिवार्य ध्यान दिनुपर्छ । महिला हिंसाविरुद्ध लेख छापिरहेका सञ्चारगृहले परेको बेला छोरीहरूले गुहार्न सक्ने भरोसा बन्नुपर्छ । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुनै पनि प्रहरमा नेपाल सरकार हाम्रो सुरक्षामा हाजिर हुनैपर्छ । हामीलाई डर मिल्काउन देऊ । सारा समाज हाम्रो रक्षक बन । नडराऊ भन्नेहरूको सातो ट्विटरमा बस्नेहरूले नखाऊ ।